Niyad jabka Fransiiska: Mareykanka iyo Australia wayna khiyaameen, kalsooni darro ayayna nagu rideen - Bulsho News
Maxaan ka naqaannaa Farmaajo iyo Rooble oo khilaafkooda cirka isku...
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa ku eedeeyay Australia iyo Mareykanka inay ka been sheegeen heshiis cusub oo dhanka amniga ah oo sababay in Paris ay u yeerto safiirradeeda.
Wareysi uu siiyay telefishinka France 2, Jean-Yves Le Drian ayaa sidoo kale ku eedeeyay waddamada “khiyaano iyo in ay jabiyeen kalsoonida dhextaalay”.
Heshiiska, oo loo yaqaan Aukus, wuxuu Australia u ogolaanayaa inay hesho farsamadii ay ku dhisi lahayd maraakiibta quusta ee quwada nukliyeerka.
Tallaabadan ayaa carqaladeysay heshiis balaayiin dollar ku kacaya oo Faransiisku la galay Australia.
Heshiiska, oo sidoo kale ay ku jirto UK, ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay dadaal looga hortagayo saameynta Shiinaha ee Badda Koonfurta Shiinaha ee lagu muransan yahay.
Faransiiska ayaa lagu wargeliyay saacado uun ka hor inta aan lagu dhawaaqin heshiiska horraantii toddobaadkan.
Isagoo hadlaya Sabtidii, Mr Le Drian wuxuu sheegay in “xiisad daran” ay ka dhex jirto xulafada.
“Xaqiiqda ah in markii ugu horreysay taariikhda xiriirka Mareykanka iyo Faransiiska aan dib ugu yeerno safiirkeenna si uu ula tashado waa fal siyaasadeed oo culus, kaasoo muujinaya baaxadda dhibaatada hadda ka dhex jirta waddamadeenna,” ayuu u sheegay Farance 2
Waxa uu sheegay in safiirada dib loogu yeeray si ay “dib ugu qiimeeyaan xaaladda”.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Yves Le Drian
Xoghayaha arrimaha dibadda ee UK ee dhowaan la magacaabay Liz Truss ayaa heshiiska ku difaacay maqaal uu ku qoray wargeyska The Sunday Telegraph, isagoo sheegay inuu muujinayo sida Britain ay diyaar ugu tahay inay “dhagaha fureysato” si ay u difaacdo danaheeda.
Heshiiska ayaa la macno ah in Australia ay noqon doonto dalkii toddobaad ee adduunka ee uu ka hawlgalaan maariikba quusta ee ku shaqeeya nukliyeerka.
Ku dhawaaqistu waxay soo afjartay heshiis ku kacaya $ 37bn oo doolar oo uu Faransiiska la saxeexday Australia sannadkii 2016 si loo dhiso 12 oo ah maraakiibta gujis-ka.
Dhanka kale Shiinaha ayaa ku eedeeyay saddexda quwadood ee ku lugta leh heshiiska amniga ay leeyihiin “maskax ku fakaraysa in Shiinaha lagu qaado dagaal qabow”.
Sarkaal ka tirsan Aqalka Cad ayaa sheegay in maamulka Biden uu la xiriiri doono Faransiiska maalmaha soo socda si loo xaliyo khilaafkooda.
Wasiirka arrimaha dibedda Australia Marise Payne ayaa sheegtay inay fahantay “niyad -jabkii” ku dhacay Faransiiska, ayna rajaynayso inay la shaqayso dalkaas.
‘Isbeddel istaraatiijiyadeed oo weyn’
Heshiiska, oo sidoo kale ay dalalkan is bahaystay ku wadaagayaan awoodaha internet-ka iyo teknolojiyado kale, ayaa la taliyaha ammaanka qaranka ee UK Stephen Lovegrove wuxuu ku tilmaamay inuu muujinayo “isbeddel istaraatiijiyadeed oo weyn”.
Waxay la micno tahay in Australia ay noqon doonto dalkii toddobaad ee dunida ee adeegsada markab quwadda nukliyeerka ku shaqeeya.
Lovegrove ayaa sheegay in heshiisku uu yahay “iskaashiga awoodeed ee ugu muhiimsam ee ka dhaca meel dunida ka mid ah 60-kii sano ee la soo dhaafay”.
Shiinaha, ayaa dhanka kale, ku eedeysay isbahaysiga inay ku fekerayaan dagaal qabow kaas oo dhaawici kara danahooda gaarka ah.
Wargeyska ay dowladda Shiinaha leedahay ee Global Times ayaa ka digay soo safidda ciidan, isagoo intaa raaciyay in ciidamada Australia ay u muuqdaan inay noqonayaan “kuwa ugu horreeya ee ku dhinta” “iska caabbinta” Shiinaha.
Maantana, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay in quwadaha shisheeye aan loo oggolaan inay farageliyaan arrimaha dalka.
“Mustaqbalka horumarka dalka waa inuu si adag ugu jiraa gacmaheenna,” ayuu yiri, sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda.
Balse wasiirka gaashaan dhigga Australia, Peter Dutton, ayaa iska riixay falcelinta Beijing.
“Tani maaha markii ugu horreysay ee aan aragnay sida uu Shiinuhu uga careysan yahay Australia,” ayuu yiri.
“Waxaynu nahay dimuqraaddiyad aan ku faanno. Waxaynu deriskeenna ku garab taagannahay hubinta nabadda, iskaashiganna wuxuu gobolka ka dhigayaa mid ammaan ah. Taasi waa xaqiiqda dayaacad kastana ma dafiri karto xaqiiqda.”
Dhanka kale, Shiinaha ayaa Khamiistii codsatay inay ku biirto heshiiska muhiimka ah ee ganacsiga Asia-Pacific iyadoo uga dan leh xoojinta halka ay kaga jirto gobolka.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas, ayaa si kastaba, beenisay in tallaabada loogu biirayo heshiiskan ay jawaab u tahay kan isbahaysiga UK, Mareykanka iyo Australia.
Haddii ay ku biirto heshiiska CPTPP, oo ay sanadkii 2018 saxiixeen 11 dal oo ay ku jiraan Australia iyo Japan, ayaa wuxuu xoojin doonaa awoodda ganacsi ee Shiinaha.
FDA spells out lower sodium goals for food...
Wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo ka jawaabay sheegashada...
Party crowds spark effort to turn down volume...
Maxaa dhaliyey eedaha loo jeedinayo Golaha Wakiilada Somaliland?
Ole Gunnar Solskjaer Oo Ka Jawaabay Wararka Sheegaya...
Pep Guardiola Oo Amaan Ugu Qubeeyay Lama Joojiye...
Cabdul Fataax Al-Burhan: Waa kumaa ninka la wareegay...